Ugqejwe elingophiyo u-Yekani | News24
Ugqejwe elingophiyo u-Yekani
U-Noluthando Yekani uphethe iziqinisekiso zamaphepha abonisa ukuba imali wayifaka ebhankini.umFANEKISO: UNATHI OBOSE
Ukhala isimbonono uNoluthando Yekani ohlala kwindawo yase Extension 6, eMfuleni, emva kokuba umntu othile nozichaze njengomthengisi wezindlu ephele emoyeni nesizumbulu semali yakhe efikelela kwi R185 000.
U-Yekani, nowayefudula ehlala kwingingqi yako 34 eHarare, eKhayelitsha, uxelele iCity Vision ukuba wathengisa indlu yakhe ngenjongo yokuzithengela enye. “Emva kokuba ndithengise le ndlu ndiye ndayokuhlala kumzala wam eBlackheath. Ndithe ndiselapho ndabona kuGumtree kuthengiswa indlu, kodwa wawungekho umfanekiso wayo kwakukho nje inombolo yomnxeba yomntu endinoqhakamshelana naye,” ucacise watsho uYekani.
Waleke ngelithi wayithatha le nombolo waze wayitsalela umnxeba efuna ukwazi banzi ngayo. Uqhube wathi umnxeba waphakanyiswa ngumntu ongusisi nowathi wazichaza njengegqwetha eliphuma kumzi wamagqwetha eSomerset West. Uhambise wathi baqhubekile bencokola emnxebeni de kwafikelela ixesha lokuba ayoyibona le ndlu kwindawo yaseBlue Downs. Ukanti uhambise wathi kwesi sithuba uxelelwe ukuba uzakuhamba nomnye umthengisi zindlu, nochazwe njengo Terresa, ukuya kujonga le ndlu.
“Eneneni ndaya eBlue Downs ndadibana nalo sisi wandibonisa indlu leyo, wathi ixabiso layo li R180 000. Ndaye ndakholwa yinkangeleko yendlu ndavuma ukuba ndizakuyithenga wade wandidibanisa no mninindlu,” utshilo uYekani.
Wongeze ngelithi ngosuku olulandelayo wamtsalelwa umnxeba lela gqiyazana wayedibene nalo ekuqaleni lifuna ukuqonda ukuba ingaba ukholiwe na yindlu. Uthe bagqiba ekubeni ngoMgqibelo umhla wesithathu kwinyanga yoMnga kunyaka ophelileyo abe ebhatala isixa esithile aze enye imali abuye ayibhatale mva. Uhambise wathi eli gqiyazana layalela mntu uthile ukuba aye kumphuthuma Gwaza waye wathumela umntu ukuba azokundithatha ngakwi nkundla kamantyi yaseBlue Downs, amse kwii-ofisi zabo eseSomerset.
Ekugalelekini kwakhe eSomerset wachazelwa ukuba ixabiso lendlu lonyukile laya kuma kwi R190 805, oku kuquka imali yomntu ebeququzelela ukuba athenge le ndlu, kunye nokutshintsha isiqinisekiso sobuninimzi. Uhambise wathi wavuma waze wahlawula imali eli R145 000.
Uthe emveni koko uthi wayalelwa ukuba akhawulezise atyikitye amaphepha endlu. Ukanti wathi xa ebuzisa ngomninindlu waxelwa ukuba sele ewatyikityile awakhe amaphepha. Uqhube wathi kwangoko umnqwazi waye awaqina, kodwa waqhubeka watyikitya, waza kamva wafaka imali engama R40 000 ebhankini. Uthe emveni koko waxelela umthengisi ukuba uya ekhefini eMpuma Koloni, kodwa ufuna ukubuyela kule dlu. Bavumelana, bohlukana ngaloo ndlela. “Ndandisoloko ndimtsalela umnxeba nangoku ndisekhayeni ukuzama ukuqonda ukuba ingaba zonke izinto zisahamba kakuhle na,” utshilo.
Ekuqaleni kwenyanga yoMqungu uYekani uthe wamxelela umthengisi ukuba uyabuya, kwaye ufuna ukufikela endlini yakhe entsha. Ekubuyeni kwakhe uthe umnxeba wawukhala wodwa ngethuba efuna impendulo, nto leyo yamnyanzela ukuba ashiye imiyalezo yomnxeba. “Nge Cawe le ndandifike ngayo ndaye ndayokuqesha iBnB ndalala kuy,” utshilo. “Ngosuku olulandelayo uTerresa wanditsalela umnxeba wathi masidibane kwapha eBlue Downs wayondibonisa enye indlu wabe esithi ingxaki kula ndlu bendiyithengile umnikazi wayo wayithengisela abantu abaninzi, ngoku kukho ingxwaba-ngxwaba abantu bafuna imali zabo,” uthethe watsho uYekani. Waleke ngelithi uTeresa wambonisa ezinye izindlu ezimbini ezithengiswayo, enye yazo yayixabisa ama R250 000, yabe enye iyindlu enguvezinyawo.
“Akazange andixelele ixabiso lika vezinyawo, ndaba ngambuza ukuba yimalini na akandixelela. Emva koko ndafumana umnxeba othi bazakube bendihlawulela iBnB ndibe ndihlala khona ixesha elingange veki (ukusukela ngoLwesine umhla we 9 kuya kuma ngoLwesithathu umhla 15 kweyoMqungu) ngelixa basandilungiselela ukuba ndifumane indlu yam,” ucacise watsho.
Uthe ngale mini aphuma ngayo kwi-BnB waya kwi ofisi yamagqwetha iLaw Society, kumbindi wedolophu, apho wafumanisa khona ukuba lo mntu akakho kuluhlu lamagqwetha abhalisiweyo, kwaye nenkampani yakhe ayikho semthethweni.
Uthe kwaye kwanyanzeleka ukuba ayekuxhwarha komnye wabahlobo bakhe eHarare kwade kwaphela inyanga, waze wathi ukuqaleni kwenyanga yoMdumba wazifunela indawo ebhatalisayo eMfuleni.
Uthe wathi akulazisa eli nenekazi ukuba alilogwetha, kwaye nenkamapani yalo ayikho mthethweni lamthuka. Ukususela ngoko azange aphinde awuphendule umnxeba wakhe, kwaye xa etsalelwa ngabanye abantu uzitshintsha igama.
Kungoku nje u-Yekani, nohlala nomzukulwana wakhe, uhlawula imali yerent engama R2 500 ngenyaka ngelixa esazama indlela yokufumana imali yakhe.
Inzame ze City Vision zokuthetha neli gqiyazana zife namthanyane. Umntu obephendula umnxeba uzikhabe ngawo omane izityholo zokuba uthengisa izindlu, watsho esithi inombolo yeyenkampani.
“Ndiyamazi uNoluthando waye watyikityile amaphepha angqinayo ukuba wayethenge indlu. Qha ingxaki yakhe akakwazi ukulinda ngoba wayexelelwe ukuba indlu leyo ayithengileyo umnikazi wayo wayegqibezela ukuyilungisa. Wathi ngokuba esokolisa wayibuyiselwa inxalenye yemali yakhe,” uphendule ngelitshoyo umntu ozichaze njengo Vuyokazi Ndinisa, kodwa watsho ukuba akaqinisekanga ukuba uYekani wayebuyiselwe malini na.
Waleke ngelithi ingxaki kaYekani wafuna ukufaka abanye abantu bangaphandle kulo mba wokuthenga lendlu abangangeni ndawo, watsho etyholo u-Yekani “ngokungaqiqi”. Uhambise watyhola lo ka Yekani ngokuthetha apha, athetha phaya. “Wathi uzokuza neenkokheli zokuhlala azofuna imali yakhe. Kudala esigrogrisa ngosibizela oonondaba. Sade samcebisa ukuba makafune igqwetha lizomela akafuna,” uthethe watsho uNdinisa.
Xa iCity Vision imbuza uNdinisa ukuba uyazelaphi yonke le nkcazelo nanjengoko ebethe ungunobhala, uphendula ngelithi uYekani ebemncokolela indabazakhe. Ugrogrise uYekani ngelithi beyinkampani bazakumangalela ngokungcolisa igama lenkampani yabo.
Ithe iCity Vision xa ibuza uNdinisa ukuba ingaba inkampani ibhaliswe ngokusemthethweni na njengoko uYekani esithi ayibhaliswa kwaye noGwaza ayilogqwetha, khange afune ukuwuphendula lo mbuzo ngokuthe ngqo, koko naye usuke wabuza ukuba bangakwazi njani usebenza inkampani yabo ingabhaliswanga.
Isithethi samapolisa aseMfuleni uNovember Filander ungqinile ukuba ityala lobuqhophololo livuliwe. Kodwa uye wala ukuthetha ngelityala gabalala ngelithi amapolisa asaphanda, kwaye ngenxa yobuzaza bale meko lizakuthatha ixesha ukuba liqosheliswe uphando.